အဘယ်ကြောင့်အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမိမိတို့ဝက်ဘ်ဆိုက်များအတွက် WORDPRESS ကိုအသုံးပြုသင့်ပါသလဲ? - Aerial Yangon
အဘယ်ကြောင့်အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမိမိတို့ဝက်ဘ်ဆိုက်များအတွက် WORDPRESS ကိုအသုံးပြုသင့်ပါသလဲ?
WordPressဖြင့်ရေးဆွွဲထားသောဝဘ်ဆိုက်များသည်စမတ်ဖုန်းများကဲ့သို့သောကွန်ပျူတာမဟုတ်သောပစ္စည်းကိရိယာများပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်သည် WordPress ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် BlackBerry နှင့် Androids ကဲ့သို့သောမိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များပေါ်တွင်ပြသနိုင်ရန် i-Mobile ကဲ့သို့သော plugins များကိုလည်းပေးထားသည်။ ထို့အပြင် WordPress တွင်ရှိသည့်တုန့်ပြန်မှုရှိသည့်စကားလုံးနှင့်အပြင်အဆင်များရှိသည်။ အကယ်၍ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကသူတို့၏ ဝဘ်ဆိုဒ်အတွက်တုန့်ပြန်သော WordPress layout ကိုရွေးချယ်ပါသူတို့၏ပုံစံသည် Android ကဲ့သို့သောမိုဘိုင်းထုတ်ကုန်ပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်လိမ့်မည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ကုမ္ပဏီများသည်သူတို့၏ WordPress ဝက်ဘ်ဆိုက်ဖော်ပြသောနည်းလမ်းကိုမိုဘိုင်းကိရိယာပေါ်တွင်“ WordPress ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိမီနူးများနှင့်စာမျက်နှာများကိုထိထိရောက်ရောက်ပြသနိုင်ရန်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးအနေနဲ့ KPI ကို ဘာကြောင့်သိထားဖို့လိုအပ်ပါသလဲ?Prev post